HIM | Health in Myanmar » 2012 » June
မြိတ်ခရိုင် မြို့နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး အမှုပေါင်း ၆၉ မှု ဖမ်းဆီး ဖော်ထုတ်
မူးယစ်ဆေးဝါးများ ရှုခြင်း၊ အသားထဲကို ထိုးသွင်းခြင်း များကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ အနေနဲ့ HIV/AIDS ကဲ့သို့ ကူးစက် ရောဂါဆိုးကြီး များက ပြည်တွင်းမှာ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များနဲ့ ဆိုးကျိုးများ အနေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ နေတယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
NLD ၏ HIV/AIDS ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆယ်နှစ်တာနဲ့ အမှတ်တရများ (၄)
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: HIV, PLH, ဖြူဖြူသင်း
သဇင်ဆေးခန်းလည်း မသိဘူး။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီလည်း မသိဘူး။ ဘာဆိုဘာမှ မသိတဲ့လူစု။ မသိတာများ ဒေါက်တာဘွဲ့ပေးရင် ဒီလူတွေ နေ့တိုင်းများ ဒေါက်တာဘွဲ့ရနေမလား မဆိုနိုင်။
အပျိုကြီးရဲ့ မေးခွန်းများ (၂)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar1 comment | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသမီး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မိန်းကလေးတိုင်း ရာသီ စပေါ်ချိန်မှာ နို့ထိပ်နေရာ အမွှေးနုလေးတွေ စပေါက်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရမှ စသိတာလဲရှိတယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးမှာ ဟော်မုန်းပါလို့ ဖြစ်စေနိုင် တယ်။
The group said it had been working in Rakhine since 1992, treating diseases such as malaria, HIV and tuberculosis.
ပျို့တာ-အန်တာမဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်က ပိုပျက်ကျတတ်တယ်လို့ ထင်တယ်။ မိခင်ကိုလဲ တနည်းတလမ်းနဲ့ ကာကွယ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ခုခံစနစ်အား နည်းလာတယ်။ မသင့်တာကို အန်ပြစ်တဲ့ သဘောဖြစ်မလား ယူဆတယ်။
အမေးအဖြေ (၅၂) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A1 comment | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသား, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဆေးသုံးပြီး ကိုယ်ဝန်ဖျက်တာ ပျက်သွားပါတယ်။ ခုအချိန် ဆီးစစ်ရင် အပေါင်းသာ ဆက်ပြအုံးမယ်။ သွေးထဲမှာ အဲဒီ ဟော်မုန်း ကုန်တော့မှသာ အနုတ်ပြမယ်။ ခံစားရတာတွေ က ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်မယ်။
A market for Myanmar heroin
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, မူးယစ်ဆေး, ဆေးဝါး
မူးယစ်ဆေး ထိုးသွင်း သူ ဒေသထဲမှာ များလာတာမို့ AIDS ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်လည်း ပိုကြီးမားလာနိုင်ပါတယ်။
A bit of news from Mae Sot
“We heard you treated about more than 100,000 people from Burma every year,” Aung Min said to her at the meeting. “That’s even more than the government does.”
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A1 comment | Tags: ပညာပေး, အမျိုးသမီး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစား၊ အဝတ်အစား၊ တန်ဆာပလာ၊ လူနေဟန်၊ စတာတွေရဲ့ အတွင်း ဘက်မှာ မမြင်ရတဲ့ အလှဆိုတာ သိကြတဲ့အတိုင်း စိတ်အလှဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန် မတတ်နိုင်ပါ။ ကိုယ်တိုင်တော့ ကောင်းကောင်း မွေးမြူ၊ သင်ယူ-ကျင့်ဆောင်နိုင်ကြ ပါတယ်။
“The chief minister of Mandalay Region told local organisations [in April] to register within two months. But most local NGOs, including our group, are still not registered.”
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါး2 comments | Tags: STD, ကျန်းမာရေး အသိ, အခွင့်အရေး, အမျိုးသမီး, အမျိုးသား
မိမိတို့ လူမပတ်ဝန်းကျင်းတွင် မိတ်ဆွေများလည်းတွေ့ဖူးမှာပါ ရည်းစားရှိလျှက် AIDS ဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်း၊ အရှက်ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်း။ ကိုယ်ဝန်တား ဆေးများ စား/ထိုးသည့်ကြားမှ ကိုယ်ဝန်ထွက်လာခြင်း။ တကိုယ်လုံးတွင် အနူကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အဖုများ ထွက်လာခြင်း…..